I-StayFocusd, isicelo esiluncedo kakhulu ukuze usebenze ngcono | Izidalwa ezikwi-Intanethi
StayFocusd, isicelo luncedo kakhulu ukusebenza ngcono
Yintoni i-StayFocusd eyenzayo kukunciphisa ixesha onokulichitha kwiiwebhusayithi ezithile. Ungawaqwalasela la maphepha achitha ixesha (iinethiwekhi zentlalo, i-imeyile, amaphephandaba ...) kwaye ukhethe elona xesha ungalichitha kuzo. Ngale ndlela, uthintela ukukhangela kwi-Intanethi kwaye kulula kwaye ujonge owona msebenzi wakho wokwenyani.
Iyafumaneka kuGoogle Chrome, esetyenziswa ngabasebenzisi abangaphezulu kwama-460.000. Esi sicelo sisebenza ngolu hlobo lulandelayo: umsebenzi oza kuwuphuhlisa uya kwahlulahlulahlulwa ube ngamanqanaba aliqela okanye imisebenzi engezantsi, eya kuthi, ngokungagqibekanga, ihlale imizuzu engama-25. Ekupheleni kwemizuzu engama-25 nganye, isicelo sikunika ikhefu elifutshane lemizuzu emi-5. Oku kwaziwa ngokuba bubuchwephesha bePomodoro, kwaye into eyenzayo kukuba ugxile kuyo yonke imisebenzi yakho kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ude ugqibe umsebenzi ngaphambi kwexesha elicwangcisiweyo.
Ukuseta esi sicelo kulula. Nje ukuba sifakwe kwiChannel yethu, nqakraza kwi icon ekufuneka ivele kwisikhangeli sethu. Nangona ngesiNgesi, ukusetyenziswa kwayo kuyinto enomdla kakhulu. Makhe siye Cwangcisa (kuphela igama ngeSpanish) kwaye emva koko siza kubona, kwithebhu, yintoni enomdla kuthi. Kwikholamu yasekhohlo yonke into esinokuyilungisa:
Ixesha elivunyelweyo-Ixesha elininzi livunyelwe kwisiza ngasinye esivaliweyo.
Iintsuku ezisebenzayo-Iintsuku apho isicelo siza kwenziwa.
Iiyure ezisebenzayo-Iiyure apho ziya kwenziwa zisebenze.
Hlaziya ixesha lemihla ngemihla-Iyure apho ikhawuntara yexesha iya kubuyiselwa ku-0.
IiSayithi eziThintelweyo-iiwebhusayithi ezivaliweyo.
Iindawo ezivunyelweyo-iiwebhusayithi ezivunyelweyo.
Ukhetho lwenyukliya-Ukhetho lwenyukliya.
Funa umceli mngeni-Sikhohlisa kakhulu, yiyo loo nto olu khetho lukhona. Mhlawumbi sifuna ukuguqula ubumbeko ukwenza amaxesha abe bhetyebhetye ngakumbi, kwaye ukunqanda oku kukho umceli mngeni onzima (kodwa akunakwenzeka, njengoko iapps isixelela) onokuthi usebenze.
Yenza ngokwezifiso -Ukuzenzela. Thatha isigqibo apha kwiintengiso ofuna ndikubonise zona (okanye hayi). Umzekelo, ekuphela kwento endiza kuyenza ingasebenzi iya kuba "I-StayFocused izaziso zokuhlaziya”(Iindaba malunga nohlaziyo losetyenziso).
Ukungenisa / ukuthumela ngaphandle useto-Ukungenisa okanye ukuthumela idatha yakho kwisicelo, ukuqinisekisa ukuba awulahlekani.
1 Ukufaka i-StayFocusd kuGoogle Chrome
2 Ukuseta i-StayFocusd
Ukufaka i-StayFocusd kuGoogle Chrome
Ngenisa ngokulula ikhathalogu yesicelo seChannel kunye khangela i-StayFocusd kwicandelo leMveliso. Nje ukuba kufunyenwe, cofa kwigama kwaye ibhokisi yencoko yababini iya kuvela neendidi ze Inkcazo ngokubanzi, iinkcukachanjl. Phezulu kuloo bhokisi siza kubona iqhosha eliluhlaza elithi "Yongeza kuGoogle Chrome”. Cofa apho ... kwaye voila! Sele unesicelo esifakelweyo. Ungasivala kwaye usivule kwakhona isikhangeli okanye ulinde nje imizuzu embalwa ukuba i icon ivele kwibar yokukhangela (iwotshi yamehlo).
Siza kuqwalasela inyathelo lesicelo ngenyathelo. Cofa kwi icon yesicelo kwaye emva koko, kuloo bubble yentetho incinci, siya kuyo Cwangcisa.
En Ixesha lokuBala livunyelwe Siza kuthatha isigqibo semizuzu esivumela ukuba sityelele ezi webhusayithi sizakuzivala. Oko kukuthi, ixesha esiza kulichitha kwezo ndawo apho singafuni ukuba khona kuba siyazi ukuba sichitha ixesha. Ngokuzenzekelayo sinemizuzu eli-10. Ndithathe isigqibo sokubathobela kwimizuzu emi-2: ukuba ndiyazithintela ezo webhusayithi, iya kuba yinto ethile. Suku?.
Iintsuku ezisebenzayo. Ukuba sifika kumhla wokusebenza, asizukukhangela kuphela uMgqibelo (uMgqibeloNgeCawa (iCawe).
Iiyure ezisebenzayo. Siyaqhubeka nosuku lokusebenza. Apha kuxhomekeke kukhetho lwexesha lomntu ngamnye. Kwimeko yam, ukusuka kwi-8: 30 AM ukuya kwi-17: 30 PM. Ewe ujonge iiyure ezili-9 ... Kodwa enyanisweni kukuba ndiyema iyure nditye, ke inyani kukuba ziiyure ezisi-8.
Hlaziya imihla ngemihla. Ndicinga ukuba ishumi elinambini ebusuku lukhetho olufanelekileyo: 12:00 PM.
Iindawo eziValiweyo. Makhe siye embindini wale nto. Eyona nto indenza ndingavelisi ngakumbi ziintanethi, njengoko ndicinga ukuba ziya kwenzeka kuninzi. Ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndibandakanye kuluhlu lwam "lwabamnyama" njengeFacebook, iTwitter, iPinterest kunye namaphephandaba andindwendwele kakhulu. Oku, ukuba ufuna i-Intanethi ngomsebenzi wakho. Ukuba uza kuyila, umlinganiso omkhulu (kwaye ngokuqinisekileyo, usebenza ngempumelelo) uya kuba kukuvimba ZONKE iiwebhusayithi. Siza kubona kamva ukuba ungayenza njani.
Iindawo ezivunyelweyo. Ezo ndawo ekufuneka singene kuzo ewe okanye ewe. Kwimeko yam, imeyile.
Ukhetho lwenyukliya. Uyakhumbula into endandiyithetha ngokuthintela zonke iiwebhusayithi? Olu khetho. Singazibamba zonke iiwebhusayithi, sinokuvumela kuphela ezo siziphawuleyo Iindawo ezivunyelweyo okanye vimba nje ezikuluhlu Iindawo eziValiweyo. Kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela: sinokuqhubeka nokuthatha isigqibo malunga nento esifuna ukuyivimba; indawo yonkeindawo yonke) okanye uhlobo oluthile lomxholo (iintlobo ezithile zomxholo), ixesha kunye neshedyuli xa sifuna olu luqwalaselo luqale (ngoku-ngoku, xa ixesha lam elivunyelweyo likhutshiwe-Xa ixesha lam elivunyelweyo liphelile, ngexesha elithile-ixesha elithile).
Okokugqibela, ndatsiba ukhetho lomceli mngeni (hayi okwangoku, enkosi) kunye noqwalaselo lwam lokugqibela kugxile kwicandelo Yenza, ukukhubaza iindaba malunga nohlaziyo losetyenziso. Ilungile!.
Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba, ukuba iGoogle Chrome ayisetyenziswanga, siya kuba nokukhetha ukuyikhuphela kwikhompyuter yethu ngokundwendwela bytesignals.com/stayfocused.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » StayFocusd, isicelo luncedo kakhulu ukusebenza ngcono
Izinto ezingama-25 uya kuziqonda kuphela ukuba uyilo
I-psychology color: Iminqweno malunga nemvelaphi yayo